Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Spain ga-anọgide na-ekpo ọkụ na 2022
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ maka ụlọ ọrụ njem ịhụ na ihe karịrị ụzọ atọ n'ụzọ anọ (78%) nke ndị na-azụ ahịa bụ n'ezie, ikekwe ma ọ bụ na-atụ anya ezumike na mba ofesi n'afọ ọzọ.
Ndị Briten agụụ na-agụ anwụ chọrọ ịlaghachi na Med n'oge okpomọkụ na-abịa, ebe ebe ọdịnala Spain na-enwetaghachi okpueze ya dị ka ebe kacha amasị anyị, na-ekpughe nyocha ewepụtara taa (Monday 1 Nọvemba) site na WTM London.
Otu ụzọ n'ụzọ atọ (34%) nke ndị na-azụ ahịa 1,000 gbara ajụjụ ọnụ site na mkpesa Industrylọ Ọrụ WTM kwuru na ha “ga-eme ezumike” na mba ofesi na 2022; ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ (23%) kwuru na ha "ga-eme" ma eleghị anya, ebe 21% ọzọ kwuru na ha nwere olileanya ịga ezumike ná mba ọzọ n'afọ ọzọ. 17% ọzọ kwuru na ha ga-ahọrọ maka ọnụnọ, ebe naanị 6% kwuru na ha anaghị eme atụmatụ ezumike ọ bụla maka 2022.
Ebe kacha mma ndị na-azụ ahịa kwuru okwu ya bụ Spain, ebe ndị ọzọ ji n'aka na ebe ezumike ha chọrọ ịga, na-ezo aka n'àgwàetiti Spanish dị ka Lanzarote na Majorca.
Ọzọkwa na ndepụta a chọrọ bụ ọkachamma ọdịnala Europe ndị ọzọ dị ka France, Italy na Gris, ebe enwere ngosipụta siri ike maka USA - nke na-apụ na maapụ maka ndị na-eme ezumike Britain kemgbe ọrịa ahụ malitere na Machị 2020.
Ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya ga-anabata nchoputa a bụ ndị na-akpali ndị na-azụ ahịa maka atụmatụ njem n'ọdịnihu n'oge ọrịa a ma ugbu a na-akọ ọkwa dị ukwuu nke ọchịchọ a chọrọ.
Ihe karịrị nde ndị Britain 18 gara Spain na 2019, na-eme ka ọ bụrụ ebe kacha amasị anyị - mana ụlọ ọrụ nyocha njem ForwardKeys kwuru na ọnụọgụ dara 40% n'oge ọkọchị a n'ihi mmachi njem Covid.
Ka ọ dị ugbu a, ndị njem si Sweden, Denmark na Netherlands gaa Spen hụrụ uto na ọnụ ọgụgụ ndị butere ọrịa na-efe efe na njem nlegharị anya ụlọ fọrọ nke nta ka ọ gbakee n'ọkwa tupu ọrịa ọrịa.
Officelọ ọrụ ndị njem nlegharị anya na Spen na UK kwuru na ọ “kpebisiri ike itinye Spain n'ihu maka ndị Briten na-achọ ezumike na mba ofesi” ma were ohere a chọrọ.
Ndị na-achọkwa itinye ego na ntinye akwụkwọ nwere ike bụ Brand USA, onye ya na ndị ọrụ nlegharị anya na ndị njem na UK rụkọrọ ọrụ n'oge ọrịa a.
Ọchịchị Biden na-arụ ọrụ na atụmatụ nke ga-achọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa si mba ọzọ niile ka ha gosipụta ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa mgbe ebuliri mmachi njem na US.
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmepe njem nlegharị anya nke France Atout France sonyeghachiri na European Travel Commission (ETC) na Septemba dịka akụkụ nke njem ya iji dọta ndị ọbịa ọzọ.
France na-atụ anya na ọ ga-abụ ihe ngosi zuru ụwa ọnụ n'afọ ndị na-abịa, ebe ọ ga-akwado asọmpi rugby Union na 2023, yana asọmpi Olympic na Paralympic na Paris n'oge ọkọchị nke 2024.
Ndị njem nlegharị anya Italytali na-atụkwa anya ịdọta ọtụtụ ndị Britain, ọkachasị mgbe a kwụsịrị ichebe ya maka ndị si Britain gbagoro ọgwụ mgbochi na njedebe nke August.
Agbanyeghị, ebe ndị dị ka Venice na-achọ ịgbake n'ụzọ ga-adigide karịa tupu ọrịa ahụ.
N'oge ọkọchị a hụrụ Venice machibido nnukwu ụgbọ mmiri ma enweela akụkọ na obodo ahụ na-ezube ịmalite ịnara ndị njem nlegharị anya site na ọkọchị 2022 gawa.
Gris bụ ebe enwetara ihe kacha mma n'oge ọkọchị a, dị ka ụlọ ọrụ nyocha data Cirium si kwuo, onye mụrụ ụgbọ elu si UK na-aga mba ndị dị na Europe.
Òtù Na-ahụ Maka Nlegharị anya nke Gris malitekwara mmekorita n'August na onye na-ebu mmefu ego Ryanair iji kwalite ebe a na-aga.
N'iji okwu 'Ihe niile ị chọrọ bụ Gris', ndị mmekọ ahụ kwalitere ezumike okpomọkụ n'agwaetiti Gris na ahịa UK, German na Ịtali.
WTM London na-ewere ọnọdụ n'ime ụbọchị atọ na-abịa (Monday 1 - Wenezde 3 Nọvemba) na ExCeL - London.
Simon Press, WTM London, Onye isi ngosi ihe ngosi, kwuru, sị: "Ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ maka ụlọ ọrụ njem ịhụ na ihe karịrị ụzọ atọ n'ụzọ anọ (78%) nke ndị na-azụ ahịa bụ n'ezie, ma eleghị anya ma ọ bụ na-atụ anya ezumike na mba ọzọ n'afọ ọzọ.
“Ndị Britain echewo nsogbu ọgba aghara njem ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ ugbu a, ebe ezumike esenidụt bụ ihe iwu na-akwadoghị n'oge ụfọdụ ọrịa na-efe efe, yabụ ọnụnọ ọnụnọ abawanyela na ewu ewu.
Ọbụlagodi mgbe anabatara njem ntụrụndụ nke mba ofesi ọzọ, chọrọ nnwale PCR dị oke ọnụ, iwu iche iche, mgbanwe obere oge na ụkpụrụ na usoro ọkụ okporo ụzọ na-agbagwoju anya - ọ bụghị ikwu banyere ọtụtụ iwu na ebe ezumike na mba ofesi.
"Ọ na-egosi nkwụsi ike dị ịrịba ama na mkpebi siri ike nke onye ezumike ezumike na UK na ọtụtụ ndị na-achọsi ike idebe ezumike esenidụt na 2022 - na oge anwụ na-egosi na ọ na-adọrọ adọrọ karịa mgbe oge ezumike ọzọ na UK."